World News | Breaking international news and headlines
26 Jun 2019 | बुधबार, ११ आषाढ, २०७६ | Edition : Nepal | UK | Australia
जर्मनीको अर्थतन्त्र निरन्तर कमजोर
बर्लिन । जर्मनीमा व्यापारिक गतिविधिले लगातार ओरालो लागेपछि यहाँको व्यवसायिक नेतृत्वको ‘सोच थप चिसिएकोे’ जर्मनीको इन्टिच्युट फर इकोनोमिक रिसर्च (आइएफओ) ले म्यूनिकमा सोमबार सार्वजनिक गरेको व्यवसायिक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । विस्तृतमा
नेपाली चेली बस्नेतलाई ‘हार्वर्ड हिरो २०१९’ को उपाधि
तालिबानद्वारा कब्जा जिल्ला अफगान सुरक्षाकर्मीद्धारा फिर्ता
२४ वटा भूउपग्रह एकैसाथ अन्तरिक्षमा
ट्रम्पको भ्रमणअघि दुई कोरियाबीच वार्ता हुने सम्भावना न्यून
पूर्वी भारतमा सडक दुर्घटना ६ जनाको मृत्यु, ४५ जना घाइते
कम्बोडियालाई बारुदी सुरुङ हटाउने उपकरण सहयोग
चिनियाँ कम्पनीलाई फाइभ–जीका २५ सम्झौता
रुसी, अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्री सकुशल फिर्ता
आसामः चालीस लाखसँग नागरिकता छैन
गुवाहाटी । भारतीय पूर्वोत्तर राज्य आसाममा ४० लाखसँग नागरिकता नरहेको सरकारी विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । सन् १९५१ पश्चात् पहिलो पटक राष्ट्रिय नागरिक दर्ता (एनआरसी) कार्यालयले आज गुवाहाटीमा सार्वजनिक गरेको मस्यौदा विवरणमा
जिम्बाबेमा मतदान सुरु
हरारे । पूर्व राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबे सत्ताच्यूत भएपछि पहिलो पटक आज जिम्बाबेमा संसद्का लागि मतदान सुरु भएको छ । मतदान केन्द्रहरुमा ठूलो संख्यामा मतदाताहरु लामबद्ध देखिएका छन् ।
पहिलो पटक पाकिस्तानी राष्ट्रिय सभामा हिन्दू प्रतिनिधित्व
इश्लामावाद, पाकिस्तान । पाकिस्तानको केन्द्रीय संसदमा १६ बर्षपछि पहिलो गैरमुश्लिम सदस्य निर्वाचित बनेको छ ।
कम्बोडियामा सत्ताधारी दलले अत्यधिक सिट प्राप्त गरेको दावी
नोमपेन, कम्बोडिया । कम्बोडियाका शक्तिशाली नेता हुन सेनले नेतृत्व गरेको सत्ताधारी दलले भारी सिट सङ्ख्याका साथ विजयी बनेको दावी आइतबार गरेको छ ।
मुगावेद्वारा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा सम्वोधन
हरारे, जिम्बाव्वे । जिम्बाव्वेका पूर्व राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबेले पदबाट हटेपछि पहिलोपटक निर्वाचन शुरु हुनुभन्दा २४ घण्टा पहिले आइतबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ जेलभित्र विरामी परेपछि...
इस्लामावाद । यसै महिना भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ परेका पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ जेलभित्र विरामी परेका एक पाकिस्तानी मन्त्रीले बताएका छन् ।
इजरायली आक्रमणमा २ जना प्यालेस्टिनीको मृत्यु
गाजा । इजरायली हवाई आक्रमणबाट उत्तरी गाजा क्षेत्रमा आइतबार दुई जना प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ । प्यालेस्टिनी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता गाजा अश्रफ अल–क्वेद्राका अनुसार मारिनेमा २४ वर्षका दुई युवा आयमान अल–नज्जर र मुहान्द हमौदा रहेका छन् ।
राष्ट्रसंघीय प्रमुखद्वारा मालिमा शान्ति स्थापना गर्न आग्रह
संयुक्त राष्ट्रसंघ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनिओ गुटेर्रेसले मालीमा राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि शान्ति स्थापना गर्न आह्वान गरेका छन् । उनले निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा अहिलेसम्म देखिएको वातावरणबाट आफू उत्साहित भएको पनि बताएका छन् ।
कम्बोडियाली आमनिर्वाचन, विपक्षी निरिह
नोमपेन्ह । कम्बोडियाको आज सम्पन्न निर्वाचनबाट हुन सेनको ३३ वर्षे प्रधानमन्त्रीत्वकाल पुनः थप हुने भएको छ । निरिह र नाम मात्रका विपक्षी
भारतमा बाढीकाे कहर
नयाँदिल्ली । भारतमा दुई हप्ताको अवधिमा बाढीका कारण मृत्यु हुनेहरुको संख्या छ सय पुगेको छ । स्थानीय सरकारी अधिकारीहरुले दिएको जानकारी अनुसार, हजारौँ घर डुबानमा परेका, बगेका र क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
पछिल्लो समय यौनलाई मानिसहरुले आधारभूत आवश्यकताको रुपमा लिँदै आएका छन् । सोही कारणले गर्दा कतिपय देशका सरकारहरुले नै अनुमति दिएर यौन बजार खुल्दै आएको छ । जसलाई हामी ‘रेड लाइट’ एरिया भन्छौं । यहाँ हामीले विश्वका चर्चित ५ यौन बजारको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गरेका छौं ।
विद्यार्थीहरुलाई व्यवहारिक रुपमै सेक्स गर्न सिकाइने एक स्कूल
१८ वर्ष नपुग्दै यौन सम्पर्क गरेका यी १० चर्चित कलाकार
थाहा पाउनुहोस मेथीपानीका यी ५ फाइदा
एजेन्सी । मेथीको साग र मेथीदानाको उपयोग धेरै तरिकाले गर्न सकिन्छ र यो स्वास्थको लागि पनि धेरै फाइदाजनक हुन्छ ।
काजु खानुहोस् यस्ता छन् फाइदा
यस्ता गल्तीका कारण प्रेमीकासँग राम्रो सम्बन्ध बन्दैन !
अम्बानीको घरको रहस्य
एजेन्सी । धीरुभाई अम्बानीका जेठो छोरा मुकेश अम्बानी अलिबाबाका संस्थापक जैक मा भन्दा पछि एशियाकै सवैभन्दा धनि व्यक्ति हुन् । भनिन्छ अम्बानीको मतलब पैसा नै पैसा हो । तपाईहरुले पनि अम्बानी परिवारको बारेमा धेरै कुरा सुन्नु नै भएको होला ।
बुधबार गर्नुस् यस्ता काम, सधैँ तपाईलाई हुनेछ फलिफाप
एउटा यस्तो ठाउँ जहाँ बहुविवाहका लागि यसरी बाध्य पारिन्छ !
अम्बानीको ड्राइभर बन्नको लागि हुन्छ यस्तो परीक्षा